MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2012-11-04
at 11/10/2012 03:41:00 PM No comments:
at 11/10/2012 03:26:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ အရှေ့ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၃) ဒေသ ကေအိုင်အေတပ်ရင်း (၁၅) နယ်မြေဖြစ်သော ဗန်းမော် - လိုင်ဇာ လမ်း ကျခန့်ဒပ်အနီးတွင် နိုဝင်ဘာ (၈) ရက် မနက်ပိုင်း (၁၀း၀၀) နာရီ အချိန်ခန့်တွင် ရှေ့တန်းသို့ ထိုးစစ်ဆင်လာသော ဗမာအစိုးရစစ်တပ် ခမရ (၄၃၇) နှင့် ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၁၅) မှ မျိုးချစ်ရဲဘော်များ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဤတိုက်ပွဲတွင် ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်ဘက်မှ (၂) ဦးသေဆုံးပြီး၊ (၇) ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ဆက် လက်သိရှိရပါသည်။
at 11/09/2012 09:11:00 PM No comments:
at 11/08/2012 11:14:00 PM No comments:
at 11/08/2012 11:13:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ အနောက်ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၅) လက်အောက် ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၅) ဒေသဖြစ်သော ၀၀မ်ကျေးရွာ အနီးတွင် နိုဝင်ဘာ (၇) ရက် နေ့လည်ပိုင်း (၂း၀၀) နာရီ အချိန်ခန့် တွင် ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် ဗမာအစိုးရစစ်တပ် ခလရ (၁၄၁) တို့ ပြင်းထန်စွာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဤတိုက်ပွဲတွင် ဗမာစစ်တပ်ဘက်မှာ (၇) ဦးသေဆုံးကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။
လွန်ခဲ့သော အပါတ်တွင်လည်း ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၅) အုပ်ချုပ် နယ်မြေဖြစ်သော ဖားကန့်ဒေသ တွင် ဗမာစစ်အစိုးရ စစ်တပ် အခြင်းခြင်း (၁၂၀မမ) လက်နက်ကြီးများဖြင့် မှားယွင်းပစ်ခဲ့မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ ကြောင်း၊ ဤသို့အခြင်းခြင်းမှားယွင်းကြောင့် ဗမာစစ်သား အများ အပြား သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ သေဆုံး ဒဏ်ရာရရှိ သော ဗမာအစိုးရ စစ်သားများကို မြစ်ကြီးနား ဆေးရုံသို့ ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် ၄၊၅ ခါ သယ်ယူခဲ့ရကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဤသို့ ဗမာအစိုးရ စစ်တပ် အချင်းချင်းမကြာခဏမှားယွင်း ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရခြင်းမှာ ဗမာ အစိုးရမှ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ စစ်အင်းအား အများအပြား ပို့ဆောင် ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ တပ်ရင်းတစ်ရင်းနှင့် တစ်ရင်းမှတ်မိခြင်း မရှိသော ကြောင့် မှားယွင်းပစ်ခတ်မှု မကြာခဏဖြစ်ပွားရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါ သည်။
at 11/08/2012 11:12:00 PM No comments:
at 11/07/2012 08:56:00 PM No comments:
at 11/07/2012 08:12:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၅) နယ်မြေဖြစ်သော မြစ်ကြီးနား - ဗန်းမော်လမ်း ဂန်ဒေါင်ယန် အခြေစိုက် ဗမာအစိုးရ စစ်တပ် ခမရ (၃၁၈) မှ နိုင်ဝင်ဘာ (၆) ရက်မနက် (၆း၀၀) နာရီအချိန်ခန့်တွင် အင်ပေါန်ရွာနှင့် ဂန်ဒေါင်ဒူ ရွားများအတွင်သုိ့ (၁၂၀မမ) လက်နက်ကြီး ဖြင့် (၄) ကြိမ် ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး ဗမာအစိုးရသည် ဂန်ဒေါင်ယန်အရှေစိုက် ဗမာစစ်တပ်ကို စစ်တပ်အပြောင်းအရွှေ့လုပ်ရန် မြစ်ကြီးနားဘက်မှ လက်နက်၊ ရိက္ခာ၊ စစ်အင်အား အလုံးအရင်းဖြင့် ချီတက်လာနေကြောင်း သတင်းရရှိပါ သည်။
at 11/07/2012 08:09:00 PM No comments:
at 11/06/2012 08:37:00 PM No comments:
at 11/06/2012 08:31:00 PM No comments:
မြန်မာအစိုးရတပ်သည် ကချင်ပြည်နယ် အရှေ့ဘက် မြစ်ကြီးနား-မန်မော် (ဗန်းမော်) လမ်း ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) တပ်မဟာ (၅) နယ်မြေသို့ စစ်အင်အားများ တိုးချဲ့နေကြောင်း သိရသည်။
ယမန်နေ့ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက် ည ၁၀ နာရီချိန်တွင် စစ်အင်အား ၈၀ ကျော်အား ခလရ ၁၀၅ တပ် အခြေစိုက်သည့် ဂန်ဒေါင်ယန် (Gangdau Yang) စခန်းသို့ အင်အားဖြည့်ခဲ့သည်ဟု ဒေသခံများဆိုသည်။
at 11/06/2012 08:14:00 PM No comments:
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရှိ ဒုန်ဝေါ့ (Dung Waw) တွင်ဖြစ်သော တိုက်ပွဲတွင် မြန်မာအစိုးရတပ်ဖွဲ့နှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) နှစ်ဖက်ဘက်မှ ကျရှုံးမှုများရှိခဲ့သည်။
ယမန်နေ့ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက် တွင် အစိုးရတပ်ဖွဲ့နှင့် KIA လက်အောက် MHH ပြည်သူ့စစ် တပ်ခွဲ ၅ တို့ ပန်ဆိုင်း တိုက်နယ် ဒုန်ဝေါ့ (Dung Waw) တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ပွားချိန် အစိုးရတပ်ဖက်မှ ၈ ဦးကျဆုံးခဲ့ရာတွင် ဗိုလ်ကြီးအဆင့် တစ်ဦးလည်းပါကြောင်း ပန်ဆိုင်းမှ KIA ဗိုလ် ဇော်ဆိုင်းကပြောသည်။
at 11/06/2012 08:08:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တွင် နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် စနေနေ့က ပထမဆုံးအကြိမ် ကချင်လူငယ်များ ဦးဆောင်သော စစ်မှန်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးအမြင်သဘောထားနှင့် ပြည်သူလူထုအမြင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို (Peace Of Life) ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေး ဖလှယ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
“ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရဲ့အမြင်တွေ အမြင်သဘောထားတွေ ဆွေးနွေးဖလှယ်သွားတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ အရေးကြီးနေတယ်။ ရှေ့ဆက်ပြီး ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာတွေကိုပါ ဆွေးနွေးသွားမယ်။” ဟု ဆွေးနွေးပွဲ ဦးဆောင်သူ နော်လီ KNG ကချင်သတင်းဌာန သို့ပြောသည်။
at 11/06/2012 08:06:00 PM No comments:
at 11/06/2012 08:02:00 PM No comments:
at 11/05/2012 06:25:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၂) နယ်မြေဖြစ်သော မိုးကောင်း ဖားကန့်လမ်း စီးအင်ကျေးရွာတွင် လွန်ခဲ့သော အောက်တိုဘာ (၁၉) ရက်နေ့က ဗမာအစိုးရစစ်သားများ ရွာသားများကို ဖမ်းဆီးနှပ်စက်၊ ခိုးဆိုးလုယှက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ စီအင်းရွာ ဥက္ကဌကို ရွာလမ်းမ ပေါ် တွင် နှိပ်စက် သတ်ပစ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ရွာမူကြိုကျောင်းမှ ဆရာမတစ်ဦးကိုလည်း အသက်ဆုံးရှုံး ရသည်အထိ မတရားပြုကျင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ဆက်လက်သိရှိရပါသည်။
ဤသို့ရွာသားများကို နှိပ်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့သော ဗမာအစိုးရစစ်တပ် စစ်ကြောင်းကို ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၆) မှ မျိုးချစ်ရဲဘောများ က ပြန်လည် လိုက်လံတိုက်ခိုက်ရာ ဗမာစစ်သား (၈) ဦးသေဆုံးကြောင်း ဆက်လက်သိရှိရပါသည်။
Cruel Burmese soldiers killed Si-In head villager and raped and killed one teacher in Si-In village, between Mogawng –Hpakang road, which in under KIA ( 2nd ) brigade area, on 19th October 2012, according to the KIA front-line officer report . On that day, the brutal Government Burmese soldiers arrested, tortured the head of Si-In villager, and killed him on the road. Again, they arrested early childhood development teacher from the village, then raped and killed her. After this incident, KIA patriotic (6) battalion followed the Burmese troops, and then fired them. (8) Burmese soldiers were killed in that battle.
at 11/05/2012 06:23:00 PM No comments: